လူနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်း | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 22/07/2009	⋅2Comments
လောဘ ဒေါသ မောဟတွေကြောင့် လူ့ အဖွဲ့ အစည်းဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို မရနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ လောဘ ဒေါသတွေကင်းစင်လာရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ နေချင်စရာကောင်းလာမယ်။ ၀ပြောဆိုပြေလာမယ်လို့ ဘာသာရေးရှုဒေါင့်ကနေ တချို့ပြောတတ်ကြတာ မကြာခဏ ကြားဖူးကြမယ်။ ဒီတော့ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ ကင်းစင်လာအောင် တရားအားထုတ်ကြလို့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းကို ပြုပြင်ဖို့ ဖော်နည်းကားပေးတတ်ကြတယ်။
ကျနော့်အမြင်မှာတော့ ဒီအမြင်ဟာရိုးလွန်းတယ်။ naive ဖြစ်လွန်းတယ်ထင်တယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခန္ဓာဗေဒကို သေသေချာချာ မဆန်းစစ်ဘဲ ပြောတဲ့အပြောလို့ပဲ ထင်တယ်။ ခုဆောင်းပါးမှာ ဘာ့ကြောင့် အဲဒီလို ထင်သလဲဆိုတာကို ရှင်းပြချင်တယ်။
တရားအားထုတ်တဲ့အတွက် လူတဦးချင်းအနေနဲ့ လောဘ ဒေါသတွေ လျော့ပါးကင်းစင်ပြီး ပိုစိတ်ချမ်းသာလာ။ လူမှုဆက်ဆံရေးပိုချောမွေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ဒီအချက်ကို ကျနော်လုံးဝမငြင်းပါ၊
ကျနော်ငြင်းချင်တာက လူတဦးချင်းအနေနဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့လာတာနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းလည်း လိုက်ပြီး သာယာဝပြောလာမယ်။ နေချင့်စဖွယ်ပိုဖြစ်လာမယ် ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲ ငြင်းချင်တာ ဖြစ်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတဦးချင်းကောင်းတိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းလည်း လိုက်ကောင်းမယ်လို့ အာမမခံနိုင်တဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ဘာလဲလို့မေးလာရင် လူတွေစုရုံးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသင်းအဖွဲ့။ အစုအဝေးကြီးလို့ အလွယ်ပြောကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ခုပြီးခဲ့တဲ့ဝါကျမှာ ပြောခဲ့သလို လူတွေနဲ့ စုရုံးဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အစုအဖွဲ့ သက်သက်တင်မဟုတ်ဘူး။
လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက အစုအဖွဲ့ဝင်တွေအချင်းချင်းကြားမှာ တိကျတဲ့ ဆက်ဆံမှု (definite relation ဒါမှမဟုတ် definite order) ရှိတယ်။ လူ့အဖွဲ့ အစည်းကို လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ် ဆိုတာထက် ခုပြောခဲ့တဲ့ ဆက်ဆံမှု (relation ဒါမှမဟုတ် order) တွေနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတယ်လို့ ပြောတာက ပိုတိကျမယ်။ Karl Marx က ဒါကိုပဲ ဘယ် လိုပြောသလဲဆိုတော့
Society does not consist of individuals; it expresses the sum of connections and relationships in which these individuals stand. တဲ့။
လူတွေ မရှိဘဲနဲ့ တော့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းထဲက အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ လူတွေရှိနေတိုင်းလည်း လူ့ အဖွဲ့ အစည်းရယ်လို့ ခေါ် ဆိုနိုင်တဲ့အရာတခု ရှိမလာနိုင်ဘူး။
ဆိုပါစို့။ လူတယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့ စည်းပုံကို ကြည့်ရင် ခေါင်းတလုံးရှိမယ်။ လက်နှစ်ဘက်။ ခြေနှစ်ဘက်ရှိမယ်။ ရင်အုပ်ရှိမယ် စတဲ့လူ့ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအစိတ် အပိုင်းတွေရှိတိုင်း လူရယ်လို့ဖြစ်မလာသေးဘူး။ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကို စနစ်တကျ ချိတ်ဆက်ရအုံးမယ်။
ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက ခန္ဓာကိုယ်အောက်မှာ ထောက်ထားမယ်။ သူ့အပေါ်မှာ ရင်အုပ်နဲ့ ကိုယ်ထည်ကို တင်မယ်။ နောက် လက်နှစ်ဘက်ကို ဘေးကိုချမယ်။ သူ့ အပေါ်မှာမှ ဦးခေါင်းရှိမယ် စသဖြင့် တိကျတဲ့အစီအစဉ် (order) ရှိရမယ်။ မဟုတ်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
ခေါင်းကိုအလယ်မှာထား။ ရင်အုပ်ကို အောက်ပို့။ ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ လက်နှစ်ချောင်းကို အပေါ်တင်ရင် လူခန္ဓာဖွဲ့ စည်းမှုမှာပါတဲ့ အင်္ဂါတွေအကုန်ပါပါရက်နဲ့ ရလာတဲ့ အသွင်သဏာန်ဟာ လူမဟုတ်ဘူး။ ဘာရယ်လို့ ပြောလို့ မရတဲ့ အရာတခုထွက်လာမှာပဲ။
ခုဥပမာကနေ နည်းနည်းလေးအတွေးဆန့်ကြည့်ရင် ကျနော်တို့နေစဉ်သုံးနေတဲ့ စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ အိမ်၊ ကျောင်း၊ လူ၊ တံတား စတဲ့နာမ်တွေဟာ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်
အသွင်သဏန် (structure ဒါမှမဟုတ် form) ကိုဖော်ပြနေကြတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိ လာလိမ့်မယ်။ အိမ်ဆိုရင်အမိုးပါမယ်။ နံရံလေးဘက်ရှိမယ်။ တံခါးပါမယ်။ ဒါတွေမပါဘဲ အိမ်မဖြစ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒါတွေပါတိုင်းလည်း အိမ်မဖြစ်ဘူး။ ပြောခဲ့တဲ့ အိမ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို တိကျတဲ့ ဆက်စပ်မှုမျိုးနဲ့ ဆက်သွယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့အရာကိုသာ အိမ်လို့ခေါ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် အိမ်ဆိုတဲ့နာမ်ဟာ အသွင်သဏာန် (form) ကိုဖော်ပြတဲ့စကားစုပဲ။
လောဂျစ်လေ့လာဖူးသူဆိုရင် not I → not S ဖြစ်တိုင်း I → S လို့တန်းကောက်ချက်ချလို့ မရဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ not I →not S ဆိုရင် ပြောနိုင်တာက I ဟာ S ဖြစ်ဖို့ necessary condition ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် sufficient condition တော့မဟုတ်ဘူး။ အလားတူပဲ။ လူမရှိရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ ဆိုတာနဲ့ လူရှိတိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ တန်းကောက်ချက်ချလို့ မရနိုင်ပေဘူး။
လူတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် necessary condition ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ sufficient condition တော့မဟုတ်ပေဘူး။ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းဟာ ပြောခဲ့တဲ့ အိမ်၊ ကျောင်း၊ လူ၊ တံတားစတဲ့ နာမ်တွေလိုဘဲ အသွင်သဏာန်ကို ဖော်ပြတဲ့ စကားစုဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ နေထိုင်သူတွေ လောဘ ဒေါသတွေကင်းစင်သွားတယ်
ဆိုအုံးတော့။ ဒီအဖွဲ့ အစည်းဟာ တရားမျှတမှုရှိတဲ့ thriving ဖြစ်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း တခုလို့ ကံသေကံမ မပြောနိုင်ဘူး။
လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူမှုဆက်ဆံမှု (social relations) တွေကို ကြည့်ရမယ်။ ဥပမာ ကျေးကျွန်စံနစ်ရှိနေတဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းတခုကို နမူနာယူကြည့်ရအောင်။
ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ ကျေးကျွန်စံနစ်ရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အလျောက် အဓိက လူမှုဆက်ဆံမှုပုံစံ (mode of social relations) က ကျေးကျွန်ပုံစံဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့တဘက်မှာ ကျွန်တွေရှိမယ်။ ကျန်တဘက်မှာ ကျွန်ပိုင်ရှင်တွေရှိမယ်။
ကျွန်ပိုင်ရှင်တွေ ခိုင်းသမျှ ကျွန်တွေက လုပ်ပေးရမဲ့ ၀တ္တရားရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုဥပမာထဲကက ကျွန်အဖွဲ့အစည်းဟာ ရောမခေတ်ကလို ကြာပွတ်သံတရွှမ်းရွှမ်း ကြားနေရတဲ့ ကျွန်အဖွဲ့အစည်းမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ပိုင်ရှင်တွေဟာ ဥပုသ်သီတင်း မှန်မှန်ဆောက်တည်တယ်။ ငါးပါးသီလမြဲကြတယ်။ ကျွန်တွေဟာလည်း အလားတူပဲ။ မခိုးမ၀ှက်ဘူး။ မုသားမသုံးဘူး။ လောဘ။ ဒေါသလည်းကင်းကြတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ လောဘ ဒေါသကင်းကြတယ်။ ကိလေသာ နည်းကြတယ်။ ဒီကျွန်အဖွဲ့ အစည်းမှာ ရန်ဖြစ်တာဆိုတာလည်း မရှိသလောက်ပဲ။
အဲဒီလိုဆိုရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုမှာ နေထိုင်သူ လူတဦးချင်းစီ သီလမြဲရင် တရား ဘာဝနာပွားများရင် ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ နေချင်စရာကောင်းတယ်လို့ ပြောသူတွေ အတွက်တော့ ခုပြောတဲ့ကျွန်အဖွဲ့ အစည်းဟာ အတော့်ကို နေချင်စရာကောင်းမှာပဲ။
ဒါပေမဲ့ သခင်နဲ့ကျွန်ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ ဒီကျွန်အဖွဲ့အစည်းကို တရားမျှတမှုရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု။ thriving ဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းလို့ ပြောကြမယ်တော့ မထင်ဘူး။ စာရှုသူရော ဘယ်လိုထင်လဲ။
 Gurndrisse, p. 265.
« Lugyi Min
Funny Poetry »
2 thoughts on “လူနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်း”
အင်း..အမေးရှိလာတော့..နဂိုကမှ..တွေးရတာ ပျော်တော့..အတွေးဆန့်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်။း)
ဒီမေးခွန်းမှာ..ဝေါဟာရက..သိပ် စကားပြောနေပါတယ်။ (ကျွန် ) နဲ့ ( သခင်) ဆိုတာ..အခုခေတ်မှာ..အနုတ်လက္ခဏာ ဆန်တဲ့ အသုံးမို့..literally လက်ခံ နိုင်စရာ မရှိသလို..။ ဒါပေမဲ့..ဥပမာ..ဗမာလူမျိုးတွေ..အလုပ်ကြမ်းနဲ့..မလေးရှား..စင်ကာပူ က..ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ..ကျွန် လို လုပ်ကြရတာကြတော့.. အလုပ်ရှုင်..အလုပ်သမား ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ အောက်မှာ..အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်သွားပြန်တယ်။ တခြားလိုအပ်တဲ့.. ဥပဒေ..ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မူ တွေလည်း ပိုလာတယ်ပေါ့လေ။ စာထဲမှာ ပြောထားတဲ့..ကျွန်အဖွဲ့အစည်းမျိုး ဆိုတာလည်း..တကယ်တော့..သီအိုရီ တခုပဲ ဖြစ်နိုင်မယ် လို့ ကျမတော့ထင်တယ်။ ဘာပဲပြောပြော..တွေးစရာပေးလိုက်လို့..ကျေးဇူးပဲ…။ ဆံပင်တချောင်းပိုဖြူသွားပြီ။း)
Posted by K | 23/07/2009, 06:55 Reply to this comment	စာတွေလာဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်…
အခုတင်ထားတဲ့ ပို့စ်လေးက တွေးစရာလေးတွေနဲ့
သခင်နဲ့ ကျွန် အဖွဲ့အစည်းလေးကလဲ
Posted by နှင်းနဲ့မာယာ | 24/07/2009, 00:02 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...